Amathuluzi Okucwaninga Amagama angukhiye angu-8 Angcono Kakhulu (Amahhala) ka-2022 | Martech Zone
Amathuluzi Okucwaninga Amagama angukhiye angu-8 Angcono Kakhulu (Amahhala) ka-2022
ULwesihlanu, February 18, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 U-Aleh Barysevich
Amagama angukhiye abelokhu ebalulekile ku-SEO. Bavumela izinjini zokusesha ukuthi ziqonde ukuthi okuqukethwe kwakho kumayelana nani ngaleyo ndlela bakubonise ku-SERP ngombuzo ohlobene. Uma ungenawo amagama angukhiye, ikhasi lakho ngeke lifinyelele kunoma iyiphi i-SERP njengoba izinjini zokusesha ngeke zikwazi ukuyiqonda. Uma unamagama angukhiye angalungile, lapho-ke amakhasi akho azovezwa imibuzo engabalulekile, engazisi ukusetshenziswa kwababukeli bakho noma ukuchofoza kuwe. Kungakho kufanele ukhethe amagama angukhiye ngokucophelela futhi ukhethe angcono kakhulu.
Umbuzo omuhle ukuthi ungawathola kanjani lawo magama angukhiye amahle, afanelekile. Uma ucabanga ukuthi kuzokubiza imali eshisiwe, khona-ke ngilapha ukuze ngikumangaze - ucwaningo lwamagama angukhiye lungaba mahhala ngokuphelele. Kulokhu okuthunyelwe, ngizokukhombisa isethi yamathuluzi wamahhala ukuze uthole amagama angukhiye amasha futhi ungakhokhi lutho. Ake siqale.
I-Keyword Planner ingenye yamathuluzi e-Google abizwa ngezitini-nodaka ocwaningweni lwamagama angukhiye. Kuhle kakhulu ukuthola amagama angukhiye emikhankaso yokukhangisa. Ithuluzi kulula ukulisebenzisa — okudingayo nje i-akhawunti Yezikhangiso ze-Google ene-2FA (into eyisibopho manje). Futhi nakhu sihamba. Ukuze wenze amagama akho angukhiye ahlobane kakhulu, ungacacisa izindawo nezilimi. Imiphumela ingase futhi ihlungwe ukuze ikhiphe ukusesha okunegama neziphakamiso zabantu abadala.
Njengoba ubona, i-Keyword Planner ikuvumela ukuthi uhlole amagama angukhiye ngokuya ngenani lokusesha kwanyanga zonke, izindleko ngokuchofoza ngakunye, ukushintsha kokuduma kwezinyanga ezintathu, njalo njalo. Into ukuthi amagama angukhiye atholakala lapha ngeke abe yizixazululo ezingcono kakhulu ze-SEO, njengoba ithuluzi lenzelwe ukukhokhelwa, hhayi imikhankaso ye-organic. Okucace bha kusethi yamamethrikhi egama elingukhiye akhona. Noma kunjalo, i-Keyword Planner iyisiqalo esihle.
Isikhundla Tracker by SEO PowerSuite isofthiwe enamandla enezindlela ezingaphezu kuka-20 zocwaningo lwamagama angukhiye ngaphansi kwe-hood, ezivela kwa-Google Abantu bayabuza futhi kumasu amaningana okucwaninga esimbangi. Ekugcineni, lokhu kukuvumela ukuthi ukhiqize izinkulungwane zemibono yamagama angukhiye amasha endaweni eyodwa. I-Rank Tracker futhi ikuvumela ukuthi ucwaninge amagama angukhiye ahlobene nendawo yakho kanye nolimi lwakho oluqondiwe. Njengoba kunengqondo ukuthi idatha eqoqwe enjinini yokusesha e-US ngeke ilunge emibuzweni, sisho, isiRashiya noma isiNtaliyane.
I-Rank Tracker futhi ikuvumela ukuthi uhlanganise i-Google Search Console yakho nama-akhawunti e-Analytics futhi ube nayo yonke imininingwane yegama elingukhiye endaweni eyodwa.
Ngaphezu kwamagama angukhiye ngokwawo, i-Rank Tracker ihlanganisa amathani amamethrikhi ukukusiza ukuthi uhlole ukusebenza kahle kwamagama angukhiye, njengenani lokusesha ngenyanga, ubunzima begama elingukhiye, ukuncintisana, ukulinganiselwa kwethrafikhi, i-CPC, izici ze-SERP, nezinye eziningi zokuthengisa kanye nemingcele ye-SEO. .
Isithombe-skrini esingezansi sibonisa imojuli yeGap yegama elingukhiye, ekuvumela ukuthi uthole amagama angukhiye izimbangi zakho esezivele ziwasebenzisa.
Enye into enhle nge-Rank Tracker ukuthi abathuthukisi babo bayalalela lokho abasebenzisi abakudingayo. Isibonelo, basanda kubuyisa ithebhu yobunzima begama elingukhiye:
Le thebhu ikuvumela ukuthi uchofoze noma yiliphi igama elingukhiye futhi ngokushesha uthole izindawo eziphezulu eziyi-10 ze-SERP kanye nezibalo zekhwalithi zalawa makhasi.
I-Rank Tracker futhi ikuvumela ukuthi uhlunge amagama akho angukhiye ngesistimu yayo yokuhlunga ethuthukisiwe futhi udale imephu yamagama angukhiye enesilinganiso esigcwele. Inombolo yamagama angukhiye, ngendlela, ayinamkhawulo.
Phendula umphakathi ihluke kakhulu kwamanye amathuluzi afanayo kukho kokubili isethulo kanye nohlobo lwemiphumela. Njengoba le generator yegama elingukhiye inikwa amandla yi-Google Autosuggest, yonke imibono etholakala ngokuthi Phendula Umphakathi empeleni iyimibuzo ehlobene nombuzo wakho wokuqala. Lokhu kwenza ithuluzi libe usizo ngempela lapho usesha amagama angukhiye anomsila omude nemibono emisha yokuqukethwe:
Ngaphezu kwemibuzo, ithuluzi likhiqiza isethi yemishwana neziqhathaniso ezihlobene nombuzo wembewu. Yonke into ingalandwa ngefomethi ye-CSV noma njengesithombe.
Ijeneretha yegama elingukhiye yamahhala
Ijeneretha yegama elingukhiye iwumkhiqizo we-Ahrefs. Leli thuluzi lisebenziseka kalula kakhulu - okudingayo nje ukufaka igama elingukhiye lembewu, khetha injini yokusesha kanye nendawo, futhi voila! I-Kenerator yegama elingukhiye izokwamukela ngeqoqo lemibono emisha yamagama angukhiye nemibuzo ehlobene enamamethrikhi ambalwa njengenombolo yokusesha, ubunzima, kanye nedethi yokuvuselelwa kwedatha yakamuva.
Ijeneretha yamagama angukhiye ivumela amagama angukhiye ayi-100 kanye nemibono yemibuzo eyi-100 mahhala. Ukuze ubone okwengeziwe, uzocelwa ukuthi uthenge ilayisense.
Kuhle mdala Ukucinga Console izokubonisa kuphela amagama angukhiye osuvele uwakala. Noma kunjalo, isekhona indawo yomsebenzi onezithelo. Leli thuluzi lingakusiza ukuthi ubone amagama angukhiye ongawazi ukuthi uwalinganisela, futhi uthuthukise izindawo zawo. Ngamanye amazwi, i-Search Console ikuvumela ukuthi uthole amagama angukhiye angasebenzi kahle.
Amagama angukhiye angasebenzi kahle angamagama angukhiye anezikhundla ezisuka ku-10 kuye ku-13. Abekho ku-SERP yokuqala kodwa adinga umzamo omncane wokuthuthukisa ukuze bafinyelele kuyo.
I-Search Console iphinde ikuvumela ukuthi uhlole amakhasi aphezulu ukuze ulungiselele amagama akho angukhiye angasebenzi njengokulindelekile, ngaleyo ndlela ikunikeze isiqalo esihle ocwaningweni lwamagama angukhiye kanye nokwenza kahle kokuqukethwe.
Naye Ubuzile, njengoba ungakwazi ukuqagela egameni lethuluzi, ikhipha idatha ku-Google Abantu bayabuza futhi ngaleyo ndlela uyakwamukela ngeqoqo lemibono emisha yamagama angukhiye. Okudingayo nje ukufaka igama elingukhiye lembewu yakho futhi ucacise ulimi nendawo. Ithuluzi lizobe seliqhuba usesho bese lethula imiphumela njengesethi yemibuzo ehlangene.
Le mibuzo empeleni iyimibono yokuqukethwe eyenziwe ngomumo (noma izihloko imbala). Okuwukuphela kwento engakwenza uphatheke kabi ukuthi unosesho lwamahhala oluyi-10 kuphela ngenyanga futhi awukwazi ukuthekelisa idatha nganoma iyiphi ifomethi. Hhayi-ke, ukwazile kanjani, ungabuza. Impendulo yizithombe-skrini. Akuwona neze umqondo omuhle ukufaka izithombe-skrini emibikweni yamakhasimende, kodwa kuyindlela yokuphuma yezidingo zomuntu siqu. Sekukonke, Okunye Okubuzwayo kungumkhiqizi wombono wokuqukethwe omuhle, futhi imibono ekunikezayo ingaba mihle kuwo womabili amabhulogi nemikhankaso yezikhangiso.
Isihloli segama elingukhiye
Isihloli segama elingukhiye ingenye yezinsimbi ezakhelwe ngaphakathi ze-MOZ. Lokhu kusho ukuthi uzodinga i-akhawunti ye-MOZ ukuze usebenzise leli thuluzi. Okuyinto empeleni elula. I-algorithm ilula kakhulu - udinga ukufaka igama lakho elingukhiye, ucacise isifunda nolimi (zihamba ndawonye kuleli cala), futhi nakhu wena. Ithuluzi lizoqhamuka nesethi yeziphakamiso zamagama angukhiye kanye nemiphumela ephezulu ye-SERP yombuzo wembewu.
Uma uchofoza Bona zonke iziphakamiso ku Iziphakamiso zamagama angukhiye module, ithuluzi lizokukhombisa imibono yamagama angukhiye angu-1000, ngakho-ke unezinhlobonhlobo ongakhetha kuzo.
Ngokuqondene namamethrikhi e-SEO, awunakho okuningi ongakuhlaziya lapha - ithuluzi linikeza kuphela ivolumu yosesho nokuhambisana (inhlanganisela yokuduma nokufana kwe-semantic negama elingukhiye lembewu).
Njengokuthi Okunye Okubuzwayo, I-Keyword Explorer ikunikeza ukusesha kwamahhala okungu-10 ngenyanga. Uma udinga idatha eyengeziwe, uzodinga ukuthola i-akhawunti ekhokhelwayo.
Igama elingukhiye Surfer
Igama elingukhiye Surfer iyi-plugin yamahhala ye-Chrome ene-Surfer-powered okuthi, uma isifakiwe, ibonise ngokuzenzakalelayo idatha yegama elingukhiye khona kanye ku-Google SERP njengoba ucinga noma yini.
Ngokuqondene namamethrikhi e-SEO ne-PPC, Igama elingukhiye Surfer lizobonisa okulandelayo: inombolo yanyanga zonke yokusesha kanye nezindleko ngokuchofoza ngakunye ngombuzo wembewu, ivolumu yosesho, nezinga lokufana kweziphakamiso zamagama angukhiye amasha. Inani leziphakamiso liyahlukahluka kuye ngokuthi (mhlawumbe?) igama elidumile, njengoba ngithole amagama angukhiye angu-31 ukudla kwamandiya futhi 10 kuphela for i-gelato.
Ithuluzi alishintshi indawo ngokuya ngolimi lombuzo ngokuzenzakalela, kodwa ukhululekile ukulicacisa ngokwakho ukuze uthole idatha efanele.
Ngaphezu kwalokho, ithuluzi lizokunikeza izibalo zethrafikhi zamakhasi aku-SERP yamanje kanye nenombolo yemibuzo efana nse abanayo.
Ngokungeziwe ekuhlaziyweni kwegama elingukhiye, ithuluzi likunikeza ukuthi ukhiqize uhlaka lwendatshana olususelwe embuzweni wembewu ngezindlela ze-Surfer AI. Isici esihle, esingase sibe isiqalo esihle uma usebenza nokuqukethwe. Noma kunjalo, i zama ngamathuluzi obuhlakani bokwenziwa yabonisa ukuthi zonke zilandela kude kakhulu kubabhali abangabantu bangempela.
Njengoba ubona, ungathola amagama angukhiye mahhala. Futhi umphumela uzoshesha, wekhwalithi enhle, futhi, okubaluleke kakhulu, ngobuningi. Yiqiniso, kukhona amathuluzi amaningi wamahhala kanye nezinsimbi zocwaningo lwamagama angukhiye, ngisanda kuthatha lawo abonakala ethakazelisa kakhulu futhi ewusizo. Nokho, yimaphi amathuluzi owathandayo? Yabelana kumazwana.
Ukudalula: Martech Zone ihlanganisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: aiwabuza futhiphendula umphakathiukuhlakanipha okungekhona okwangempelakhulula seo amathuluziamathuluzi mahhalai-google autosuggestumhleli wegama elingukhiye le-googleAmagama angukhiye e-googlei-google search consoleubunzima begama elingukhiyei-explorer yegama elingukhiyeijeneretha yegama elingukhiyeucwaningo lwegama elingukhiyeigama elingukhiye surferamagama angukhiye we-organicukhokha ngokuchofoza ngokukodwaucwaningo lwe-ppcisikhundla se-trackersesha imiquluseoamagama angukhiyeama-seo amathuluzii-surfer ai